Turkiga oo ka quustay qorshe uu ka quud darraynayey dalka Afghanstan + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Turkiga oo ka quustay qorshe uu ka quud darraynayey dalka Afghanstan +...
Turkiga oo ka quustay qorshe uu ka quud darraynayey dalka Afghanstan + Sawirro
(Kabul) 25 Agoosto 2021 – Millateriga Turkishka ayaa bilaabay inay soo daad gureeyaan askartii iyo howlwadeenkii ka joogey garoonka Kabul International Airport maanta oo Arbaco ah, sida ay sheegtay Wasaaradda Gaashaandhigga dalkaasi.
Tillaabadan ayaa timi kaddib markii uu Turkishku meel marin waayey qorshe uu ku doonayey inay ciidankiisu sii joogaan garoonka xitaa marka ay NATO baxdo, taasoo ay iska diideen Daalibaanka oo xog-siin saxaafadeed markale shalay ku caddeeyey inaysan doonayn ciidamo Turki ah oo sii jooga.
Sida ku cad xogaha laba ilood oo muhim ah, Turkey ayaa haatan garoonka uga sii tegaya ciidamada gaarka ah oo qura isago rayidka iyo ciidamada qaar sii gaynaya Islamabad berri subax oo Khamiis ah.
Ciidamada gaarka ah ayaa intaa sii furfuri doona agabka ciidan ee ka yaalla Garoonka Kabul si aanay uga daba marin waqtiga ay Daalibaanku qabteen oo ah 31-ka bishan inay ciidamadu ku wada baxaan, taasoo uu Maraykanku aqbalay.
Previous article”Waxaan dalbanaynaa doorasho daah-furan!” – Beesha Caalamka oo saluugtey hab-raacii lasoo saaray
Next articleSweden oo dadka qaar siinaysa kuuro 3-aad oo ah tallaalka Covid-19 (Yaa ka mid ah?)